DAAWO SHIRKADA KORONTADA BANAADIR OO QIIMA DHIMIS BALAARAN SAMEYSAY IYO BULSHADA OO SOO DHAWEYSAY |
DAAWO SHIRKADA KORONTADA BANAADIR OO QIIMA DHIMIS BALAARAN SAMEYSAY IYO BULSHADA OO SOO DHAWEYSAY
Shirkada Korontada Banaadir (BECO), ayaa waxa ay sameysay qiima dhimis aad u balaaran kadib xaflad aad u weyn oo ay kasoo qeyb galeen bulshada qeybaheeda kala duwan oo ka dhacday Maalintii Khamiista aheyd hotelka Diplomatic ee magaalada Muqdisho.
Munaasabada ayaa waxaa ugu horeyn lagu furay dersi diini ah oo ka hadlayay ganacsiga iyo wanaaga uu leeyahay iyo sidoo kale Ribada iyo dhibka ay leedahay, iyada oo sheekhu uu ku dheeraaday ku dardaarmida ganacsida wanaagsan ee aduun iyo Aakhiraba lagu guuleysan karo, waxaana xigay oo munaasabada isna ka hadlay Cawil Tooxow Kheyre oo kamid ah masuuliyiinta Shirkada Korontada BECO, waxa uuna ka hadlay waxa ay tahay Shirkadu iyo cida iska leh.
“BECO bulshada ayaa iska leh. Maantana waxa aan sameynay Qiima dhimis aad u weyn, mid kalana dhawaan ayaan sameyn doonnaa. Waxa aan idinka rajeyneynaa adinkana in aad nala shaqeysaan, taladiina muhiim ayey noo tahay. Shacabkeennu waxa ay helayaan koronta raqiis ah iyo shaqaala tababaran oo u jooga qancintooda. BECO dadka oo hurda ayeey shaqeysaa. Dadka oo ciidaya ayey shaqeysaa. Dadaka oo jimceysanaya ayeey shaqeysaa, intaas oo dhanna waxaa naqu qasbaya qancinta macaamiisheena sharafta Mudan.
Shirkada Korontada Banaadir waxa ay ka shaqeysaa Muqdisho iyo gobalada ku xeeran hasa yeeshee waxa aan ku hanweynahay in aan dhamaan gobalada dalka gaarno Bi’idnilaahi Kariim, waxaana maalin waliba nasoo waca Soomaalida ku nool gobalada kala duwan oo dalka oo na weydiiya xilliga aan xarumo ka sameysan doonno deegaanadooda”, Cawil Tooxow Kheyre ayaa u sheegay marti sharafkii ka qeyb gashay munaasaba qiima dhimista lagu soo bandhigayay.
Mudane Cawil ayaa waxa uu sheegay in bulshadu maanta wixii ka danbeeya ay adeegsan karaan qalabkii ay kabaqi jireen oo ay kamid yihiin feerooyinka, qasaaladaha, warshadaha waaweyn iyo wixii lamid ah maadaama qiima dhimis ay ku farxaan shacabku ay ku dhawaaqeen.
Kheyre waxa uu balan qaaday in ay ka qeyb qaadan doonaan howlaha kale ee bulshada wax u taraya oo ay kamid yihiin dhismaha wadooyinka iyo adeegyada caafimaad.
Ciise Maxamed Cabdi, Madaxa Howl-gelinta Shirkada Korntada Banaadir oo kmaid ah masuuliyiinta goobta ka hadashay ayaa waxa uu ku dhawaaqay qiima dhimista la sameeyay iyo mid ay damacsanyihiin ay ku talaabsanaan sanadkaan gudihiisa, waxa uuna Yiri, “BECO waxaa la’aasaasay sanadkii tegay, waxa ayna durbadiiba sameysay qiima dhimis iyada oo dhaaftay $0.2 kana dhigtay qiimihii $1.00 maantana waxaan mar kale sameysay qiima dhimis kale, waxaana halkii Kilowad qiimahiisu noqonayaa 0.79, waxaana rajeyneynaa in dhawaan aan sameyno qiima dhimistii ugu balaarneed abid si cid kasata ay u awood ugu yeelato isticmaalka korontada”.
Martidii goobta lagu casuumay waxaa kamid ahaa masuuliyiin jaamacadeed kuwaas oo hadallo ay ku cabirayaan dareenkooda ku aadan qiima dhimista ka sheegay munaasaba, waxaana kamid ahaa Hormuudka Jaamacada SIU, Prof Yaxye oo yiri, “Aad ayey u mahadsanyihiin Maamulka BECO oo aan ku amaanayo dadaalkooda. Muqdisho waa meel ku dayasho Mudan. Korontada laga helo waxa ay wax badan ka wanaagsantahay dalalka deriska ah. Kenya ayaa kuugu dhaw waxa aad ku arkeysaa xaafado korontadu ka maqantahay Maalma dhan. Qiima dhimista hada la sameeyayna aad ayaan u soo dhawnayaa. Aniga ahaan bishii waxa aan koronto ku bixi jiray $4,000 oo doolar marka aan xisaabtamayna waxaa ii hari doona lacag dhan $700. Aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa”.
Abwaan Cali Xuseen Siyaad (Cali Banaadir) oo kamid ahaa ka qeyb galayaashay Munaasabada ayaa waxa uu isna ka tiriyay munaasaba gabay lagu amaanayay wax-qabadka Shirkada Banaadir iyo sida ay ugu diirsatay bulshada Muqdisho ku nool.
Intii ay socotay Munaasabada ayaa waxaa sidoo kale lasoo bandhigay sawira ka tarjumaya sida uu ahaa jiray hanaanka koronto ee magaalada Muqdisho kahor aasaasidii BECO iyo halka ay hiigsaneyso shirkadu sida ay u taallo.
Gudoomiyaha Odayaasha dhaqanka beelaha Muqdisho Maxamed Xassan Xaad oo isna markiisa makrafoonka lagu soo dhaweeyay ayaa waxa uu sheegay in dhankooda ay soo dhaweynayaan qiima dhimista aadka u balaaran ee Shikadu sameysay isaga oo ku booriyay in ay sii wadaan dadaalka muuqda ee ay hayaan.
Shirkada Korontada ee Banaadir oo ay ku midoobeen shirkadihii korontada ee ka jiri jiray magaalada Muqdisho ayaa waxaa la aasaasay sanadkii hore, waxa ayna durbadiiba ku talaabsatay horomar la taaban karo maadaama ay isu geyn ay kiiloowaadkiiba ay ka dhintay qiima dhan $ 0.41